Mid kamid ah la taliyaashii Farmaajo oo Villa Somalia laga xirtay & War cusub oo soo kordhay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Mid kamid ah la taliyaashii Farmaajo oo Villa Somalia laga xirtay & War cusub oo soo kordhay
Allhadaaftimo March 11, 2020 Uncategorized
Warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in Siyaasiga Salaad Cali Jeelle laga mamnuucay inuu galo madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna Mr. Jeelle kamid ahaa la taliyeyaasha madaxweyne Farmaajo.
Ilo wareedyo ku sugan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in arrintan ay timid kamid ah markii ay isku dhaceen Siyaasi Salaad Cali Jeelle iyo Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya, taas oo gaartay murankooda xafiiska madaxweynaha.
Amarka Salaad Cali Jeelle looga mamnuucay gelitaanka Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa wuxuu ka soo baxay agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya Mudane Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade), waxaana lagu wargeliyay dhammaan laamaha madaxyooyada inuusan soo geli karin ilaa iyo amar dambe.
Lama oga arrimaha salka uu ku hayo Khilaafkan, waxaana jira dadaalo lagu kala dhex galayo ama lagu qaboojinayo arrintaan.
Siyaasi Salaad Cali Jeelle ayaa kamid ah siyaasiyiinta Beesha Mudulood ee afka ku difaaca dowladda federaalka Soomaaliya maadama sid wararku ay sheegayaan uu lacag ka qaado madaxtooyada.
Previous Kenya ayaa Ethiopia udirtay wefdi loogu tala galay in ey kala hadlaan iskaashiga ay yeelan katraan Soamliya iyo Ethiopia
Next Baarlamaanka Maamulka Puntland Oo Lagu Sheegay In Ay Yihiin Baarlamaanka Ugu Musuqmaasuqa Badan